'बाइडेन शासनकालमा पनि अमेरिका चीनको असल साझेदार हुन सक्दैन'
‘बाइडेन शासनकालमा पनि अमेरिका चीनको असल साझेदार हुन सक्दैन’
काठमाडौं, १७ माघ । चिनियाँ विश्लेषक तथा विशेषज्ञ अमेरिकी उच्च अधिकारीका पछिल्ला प्रतिक्रिया चीनका लागि उत्साहजनक नभएको ठान्दछन् । उनीहरुका अनुसार अमेरिकाले एकातिर चीनसँग साझेदारीको अपेक्षा गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर चीनको सामना गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरु ठान्छन् कि अमेरिकी अपेक्षामा शत्रुता, पूर्वाग्रह र सहयोगको माग मिश्रित छ, चीनका लागि यो हैरानीको बिषय त हो तर आश्चर्य मान्नु पर्ने नयाँ कुरा भने हैन ।
चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरु वाइडन प्रशासनले पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनबाट भएका गल्ती अबिलम्ब सुधार गर्नु पर्ने प्रष्ट र यथोचित धारणा राख्दछन् । उनीहरु भन्छन् कि अमेरिका चीनका न्युनतम शर्तहरुबारे पुनःस्पष्ट हुन पर्दछ । चीनले वाइडन प्रशासनसँग सहयोग र सहकार्यका लागि संवाद अगाडि बढाउनु अघि शान्ति र धैर्यताको माहौल प्रतीक्षा गर्नु गर्दछ ताकि अमेरिका आफ्नो आन्तरिक गन्जागोलबाट मुक्त होस् र चीनसँग रचनात्मक नीति अघि सार्न सवाललाई राम्ररी पहिचान गर्न सकोस् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनले गत बुधवार कार्यभार सम्हाल्दै एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उनी जलवायु परिवर्तन र अन्य साझा सरोकारका सवालमा चीनसंग सहकार्य गर्ने पक्षमा छन् । तर, सोही दिन विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उनका पूर्ववर्ती माइक पम्पिओले लगाएको शिनजियान नरसंहारको निराधार आरोप दृढतापूर्वक उठाइएको छ, जुन पूर्णतः चीनको आन्तरिक मामिला हो ।’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिनले ब्लिङकेनको पम्पिओ अडानलाई खण्डन गर्दै बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले भने, ‘महत्वपूर्ण सवाललाई तीनपटक भन्नु पर्ने हुन्छ– चीनमा कुनै नरसंहार भएको छैन, चीनमा कुनै नरसंहार भएको छैन, चीनमा कुनै नरसंहार भएको छैन ।’
उनले अगाडि थपे– पम्पिओको चीन विरोधी भनाई इतिहासको फोहोर फाल्ने भाँडोमा हाल्न जरुरी छ । हामीलाई विश्वास छ कि वाइडन प्रशासनका सम्बन्द्ध व्यक्तित्वहरुले इमान्दारितापूर्वक यो सच्चाईलाइ स्वीकार गर्ने छन र तथ्यमा आधारित भएर सिनजियानको स्थायित्व र विकासलाई सामना गर्नेछन् ।
सिनजियानजस्तो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी शक्तिहरुको चीन प्रतिवाद गर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र विकासको प्रश्नमा चीन स्पष्ट छ ।
रेनमिन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन विभागका डिन जिन क्यानरोङका अनुसार ब्लिङकेनको वक्यव्य चिनियाँ विशेषज्ञहरुको अनुमानभन्दा खासै फरक थिएन । उनको वक्तव्यले अमेरिकाले चीनसंगको सम्बन्धलाई ‘नकारात्मक धारणासहित उच्च महत्व’ दिएको पुष्टि हुन्छ ।
जीन भन्छन्, ‘ब्लिङकेनले एकातिर सहकार्यका लागि आफ्ना मागहरु राखे, अर्कोतिर पुराना पूर्वाग्रहहरु परित्याग गर्न अनिच्छुक देखिए, चीनको आन्तरिक मामिला र मूल स्वार्थहरुप्रति शत्रुतापूर्ण कथन अघि सारे ।’
बेइजिङस्थित चिनियाँ एकेडमीका अमेरिका अध्ययन विशेषज्ञ लु जियाङ भन्छन्, ‘अमेरिका यदि हामीसँग डिनर गर्न चाहन्छ भने टेबलमा संगै बस्ने आँट पनि गर्नु पर्दछ । हामी आशा गरौं कि वाइडन र ब्लिङकेन ट्रम्प र पम्पिओभन्दा यस मानेमा बढी परिपक्क र मर्यादित छन् ।’
‘चीनलाई घेर्नु असंभव उद्धेश्य हो’ बिहिबार चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कर्नेल वु कियानले एक नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा चीन–अमेरिका सम्बन्धबारे बोल्दै भने, ‘अमेरिका र चीनको सैन्य सम्बन्ध अहिले एक ऐतिहासिक बिन्दूमा छ, चीन अपेक्षा गर्छ कि अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले चीनसंग संवादको सघनता र सहकार्यमार्फत् असहमतिहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने छ ।’
लु जियाङ भन्छन्, ‘अमेरिकी अधिकारीहरुलाई मन परोस वा नपरोस्, ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई घेर्न सबै निम्नकोटीका प्रयत्नहरु गरेको थियो, ट्रम्पले चीनलाई कक्राउँन खोजेका थिए, तर, त्यसले अन्ततः उनैलाई ठूलो घाटा भयो । ट्रम्पले चीन मामिलामा नरम शक्तिको सामथ्र्य गुमाएका थिए र सैन्यशक्तिको तनाव बढाएका थिए । व्यवसायिक स्वार्थहरुलाई गुमाउनु, कोरोना महाब्याधीको संक्रमणलाई अझ हानीकारक हुन दिनु ट्रम्पका मुर्खता थिए, जबकी चिनियाँ अनुभवले त्यतिधेरै क्षति हुन दिएन ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘वाइडन प्रशासन यी गल्तीहरुबाट ब्युझिन आवश्यक छ । चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी देश अवश्य हो तर हानीकारक प्रतिशोध लिने शक्ति चाहिँ हैन । हामी उनीहरु जस्तो प्रतिशोधको मानसिकतामा छैनौं । हामीलाई थाहा छ कि अहिले अमेरिका कमजोर आत्मविश्वासको अवस्थामा छ । उसका थुप्रै घरेलु समस्याहरु छन । ती समस्याहरु चीनलाई अगाडि देखाएर केही समय छोपिएलान् तर हल हुनेवाला छैनन । वाइडन प्रशासनले परिपक्क र प्रष्ट नीति अगाडि सारोस्, पर्खने धैर्यता चीनसंगमा छ ।’
चिनियाँ चुनौतिलाई सामना गर्ने नाममा ‘एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा वैधानिकता र सन्तुलन’ खोज्ने रणनीति अमेरिकाले अहिले नै अबलम्बन गर्न हतारो गर्नु नहुने चिनियाँ विज्ञहरु ठान्दछन् । त्यस्तो काम नयाँ वोतलमा पुरानो रक्सी हालेजस्तो मात्र हुनेछ । विगतमा अमेरिकाले यस्तै गल्ती गरेको थियो, त्यसले नयाँ प्रकारको असन्तुलन सृजना गर्‍यो ।
बिहिबार शान्ति र निशस्त्रीकरणका लागि चिनियाँ जनसंघले आयोजना गरेको अनलाईन संवाद कार्यक्रममा ‘कि-नोट’ प्रवचन दिँदै अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदुत कुई तिआनकाईले भने, ‘फेरि एउटा अर्को ऐतिहासिक बिन्दू आएको छ, अहिले चीन र अमेरिका दुवैका लागि असल छनौटको अवसर बनेको छ । विश्वास, सम्मान र सामान्यता पुनःस्थापित दुबै देश एकअर्कासंग नजिकको सम्बन्धमा रहन पर्दछ । चीन चाहन्छ कि अमेरिका आफूभित्र एकता निर्माण गर्न सफल होस् । र यो अपेक्षा गर्दछ कि उसको चीन नीतिमा स्पष्टता, सम्मान र दुरदृष्टि देखा परोस् ।’
बुधबारको प्रेस सम्मेलनमा ब्लिङकेनले सहकार्यको माग गर्दै भनेका थिए, ‘अमेरिका र चीन सम्बन्ध निक्कै महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कसैबाट लुकेका छैन । यो सम्बन्धले विश्वको अगाडिको बाटो तय गर्दछ । यसले भबिष्यलाई आकारित गर्ने क्षमता राख्दछ ।’ उनको जोड ‘जलवायु परिवर्तनमा सहकार्य’ माथि थियो ।
तर, बुधबार नै जलवायु सम्बन्धी ह्वाइटहाउसका राष्ट्रपतीय दूत जोन केरीले अमेरिकासँग चीनलाई सौदाबाजी गर्नु पर्ने कुनै मुद्दा नभएको बताएका थिए । उनले भने, ‘स्पष्ट छ कि चीनसंग हाम्रा थुप्रै गम्भीर भिन्नताहरु छन्, जस्तो कि बौद्धिक सम्पतिको चोरी, बजार पहुँच, दक्षिण चीन सागरसंग सम्बन्धीत विषयहरु, यी कुनै पनि मुद्धा जलवायु परिवर्तनको मुद्दासँग सौदाबाजी हुन सक्दैनन् ।’
फुदन विश्वविद्यालयका उपमहानिर्देशक छिन क्वीङ भन्छन्, ‘चीनका न्युनतम् शर्तहरु प्रष्ट छन र त्यसलाई अमेरिकाले कम आँक्न मिल्दैन । ती भनेका चीनको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, विकास र समृद्धिको स्वार्थ र हङकङ, शिनजियान र ताइवानसँग जोडिएका सवाल हुन् ।’
जिन क्यानरोङकोे विचारमा चीनको दृष्टिकोण बिल्कुलै व्यवहारवादी छ । सुरक्षाको सवाल सर्वथा उच्च प्राथमिकतामा छ । त्यो भनेको ताइवान र दक्षिण चीन सागरको सवाल पनि हो । यो विन्दूमा हुने कुनै पनि द्वन्द्व घातक हुनेछ । दोस्रो– अर्थतन्त्र र व्यापारको सवाल हो । यो सवाल जनताको जीवन निर्वाहसँग जोडिन्छ । यी मुख्य दुई प्रश्नमा अमेरिकाले तनाव नगर्ने र रचनात्मक उपायहरु खोज्ने हो भने संवाद र सहकार्यको नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ ।
वाइडन प्रशासनले आफ्नो चीन नीतिलाई अझै प्रष्ट गर्न सकेको छैन । व्यापार र प्रविधिको बिषयमा उस्का अडानहरु प्रष्ट छैनन । हुवेईसंग जोडिएको भन्सार र अन्य शुल्क सम्बन्धी गतिरोधलाई अबिलम्ब निर्णयमा पुर्याउँनु पर्ने आवश्यकता छ । चीनलाई सहुलियत दिँदा आफ्नो अर्थतन्त्र बर्बाद नहोस भनेर अमेरिकाले सोच्नु अन्यथा हैन ।
चीनको सामना गर्न एक बृहत्त गठबन्धन गर्ने वाइडन प्रशासनको नीतिबारे पनि अझै कुनै प्रष्टता छैन । जो वाइडनका मन्त्रीहरुले यसबारे कुनै ठोस योजना बनाएका छैनन । वितेको एक हप्ता उनीहरुको बाहिरी हाउभाउमै गयो । वाइडनले बाणिज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी जिना रायमोडोले हुवेईबारे ट्रम्प प्रशासनको नीति कायम राख्ने वा नराख्नेबारे केही बताउन सकिनन् ।
चिनियाँ वाणिज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसन्धान मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक वाइ मिङ भन्छन्, ‘वाइडन प्रशासनले चीन नीतिबारे कुनै योजना र रुपरेखा कोरिसकेको छैन, उनीहरु अझै परिक्षणमा नै छन् ।’
वाई मिङको विचारमा आन्तरिक नीतिमा जस्तै वाइडनले बाह्य नीतिमा पनि ठूला व्यवधानहरु सामना गर्नु परिरहेको छ । वाइडन प्रशासन अहिले चौतर्फी दबाबमा छ । कुनै निर्णय लिनु अघि उनीहरुले धेरै सोच्न जरुरी छ । वाइडन प्रशासनका नीतिमा सन्तुलन, स्वार्थरक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको संभावना एक साथ हुनु पर्नेछ । त्यसको प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्र र चीन दुबैमाथि पर्ने छ ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘वाइडनले अल्पकालिन कुरा सोचेर हुँदैन । उनी ट्रम्पका कार्वाहीहरु अगाडि बढाउँन चाहँदैनन् । समस्यालाई धेरै टाँगिन र छिरलिन दिनु पनि उनको हितमा छैन । चीन चर्को र अबैध महसुल र शुल्कहरुबाट अमेरिका फिर्ता होस भन्ने चाहन्छ, यसले अमेरिका र चीनको सहकार्यलाई ठीक विन्दूमा फिर्ता ल्याउँन सक्दछ ।’
बेइजिङ स्थित चिनियाँ समाज विज्ञान एकेडमीका विशेषज्ञ गाओ लिनगुइनका अनुसार वाइडनले अमेरिका–चीन सम्बन्धबारे ४ बर्ष चल्न सक्ने नीतिगत रुपरेखा पुनःर्संरचना गरिरहेको हुनु पर्दछ ।
वाइडनले यस बीचमा विश्वका केही नेताहरुसंग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन । ती मध्ये एक रुसका राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुटिन पनि छन । विश्व प्रेस जगतको अपेक्षा छ कि उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सिन जिन पिङसंग पनि त्यस्तो टेलिफोन वार्ता गरून् । विगतको प्रचलन हेर्दा सपथ ग्रहणको महिना दिन भित्रै यी दुई देश बीच फोनवार्ता हुने गरेको थियो ।
जीन क्यानरोङको विचारमा अमेरिकासंग अहिले चीनको एक्लै सामना गर्ने आत्मविश्वास छैन । त्यही सन्देश दिन उनी चीनसंग भन्दा अगाडि अरु नै ठूला गठबन्धनसंग कुरा गर्दैछन् । अहिले उनको ध्यान एशियाली गठबन्धन राष्ट्रहरु तिर छ । सायद त्यसपछि उनले चिनियाँ नेताहरुसंग वार्ता गर्ने छन् ।
लु जियाङ भन्छन्, ‘चीनलाई अहिले हतार पनि छैन, चीनले पर्खिन सक्दछ । विभागीय अधिकारीहरुको स्तरमा कुराकानी हुँदै गर्नु राम्रै हो । राष्ट्रिय नेतृत्वबीच केही समय लिएर तयारीसहित कुराकानी हुनु नै राम्रो हुनेछ ।’
(ग्लोबल टाइम्सको सहयोगमा)
एक दिन मैले गाई बनाउन बसेको कुकुर बन्न पुग्योः हरिवंश आचार्य
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले के गर्ला ?
पश्चिम बंगालमा हार्लिन् त ममता बेनर्जी ?
ओलीका आमसभाः व्यापक ‘जनसमर्थन’ कि ‘पञ्च र्‍याली’ ?
अबको बाटोः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, नयाँ निर्वाचन कि तेस्रो जनान्दोलन ?
सत्तारुढ नेकपाले मदन भण्डारीभन्दा केपी ओली लोकप्रिय देखेको हो ?
किन भयो म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ ? यस्ता रहेछन् कारणहरु
के ओलीले साँच्चै बोक्लान् ‘हिन्दू–राज्य’ को एजेण्डा ?
नेकपाका दुवै समूहको दृष्टि निर्वाचन आयोगतिर, आयोगको दृष्टि कता ?
इरान समर्थित विद्रोही समूहमाथि कारबाहीका लागि अमेरिकाको अनुमति
काठमाडौं, १५ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले इरान समर्थित विद्रोही समूहमाथि कारबाहीका लागि स्विकृति दिएका छन् । कार्यभार...